Maxaa ka jira in Dowlada Somalia ay saxiixday in la soo celiyo Soomaalida Sweden? | Somaliska
Maalmihii la soo dhaafay waxaa la isla dhex marayay warar sheegaya in wasiir ka tirsan dowlada Somalia uu dhawaan booqasho ku yimid Sweden halkaasi oo uu heshiis kula saxiixday dowlada Sweden in Somalia ay qaabisho dadka qasabka looga musaafurinayo wadankaan, ka markii sharciga loo diiday.
Wararka ayaa sheegaya in wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Somalia Abdirahman Aynte uu heshiiska saxiixay. Inkastoo aan warkaan wali la xaqiijin, ayay haddana dhab tahay in dowlada Sweden ay arintaan ku haminaysay ilaa sanadkii hore. Isbuucii hore ayay ahayd markii wasiirka socdaalka Morgan Johansson iyo kan arimaha gudaha Sweden Anders Ygemen ay soo bandhigeen qorshe culus oo dadka lagu musaafuriyo, kaasoo qaasatan la soo carab-qaaday Somalia.
Qorshahaas ayaa waxaa ka mid ah in dadka sharciga loo diiday xabsi la dhigi doona, inta laga musaafurinayo iyo in wadamada lagu celiyo dadkaasi ay soo diri doonaan saraakiil qofkaan wehlin doona in dalkiisa lagu celiyo. Xitaa waxaa la sameyn doonaa shaqaale gaar ah oo ka shaqeeya safaaradaha Sweden ee ku yaala wadanka dadka lagu celiyo.
Haddaba si aan u xaqiijiyo in uu heshiiskaan dhabyahay ayaan waxaan fariin u diray xafiiska wasiirka Socdaalka Sweden, kaasoo aan wali jawaab ka sugayo. Wixii ku soo kordha dib ayaad kala socon doontaan.
May 7, 2016 at 11:20
Warkas haduu jiro wa dhibaato hor leh xaqiiqdii, ta kale intay igu celinayaan miyaanay wadankaygii oo waliba noloshayda oo dhan aan ku soo qaatay ahayn somalia Guul ,
May 7, 2016 at 13:07
asc somali aliag waxaa aminsanahaay hadi warkaas ruun yahaay wax dhiib maleeh wayo somali waa wadankeen wanaa meel fiican .marka no moruug dadoow
Asc wr wbt walhi waxaan oran karaa waa guul iyo gobanimo u bilaaba tay umadeena soomaliyeed ee qurba ha ku magaranayo bee shay haday runta hay arintaasi celin ta ah waxan leeyahay guul guul guuul
hadii ey arintaas sax noqoto ayey dadbadan oo soomaali ku jirto caqabad ku noqon doontaa lkin ilaah ayaa irsaaqada haya meshey geeyaan ayaa laga yaabaa in nimco ilaah ka siiyo oo lama filaah ah qofkii nool rajuu leeyahay alle naxariistiisa lama quusto waxa jira dad ayaga la mida oo badaha iyo saxaraha ku soo dhintay ilahey ha u naxariistee kuwa dhibka heystana alle ha ka dulqaado
May 7, 2016 at 16:25
Azc warksu hdu run yahay wanu ku frxsanhy
Hal mid wanku faraxsanahay, tahriibka halista oo dhalinyaradii somaliyeed badaha kudhamadeen ayaa yaraneyso. Midna wankaxumahay soomalida sanada badan sweden bila sharci kunoolaa in xoog lagu celiyo.
nuradin bashir abdallah says:
war la hubo ku dadaal walaalkow
War dadkani miyay waalan yihiin horta waan ku faraxsan nahay in dadka la celiyo ku hayo …!!!!!!!!!
qiyaas qof soo tahriibay oo yurub 8 sano bilaa sharci ku ahaa Swedena ay siisay 3 Negative, oo ay kusoo baxday 10 kun $. Stress iyo Depression hayo oo kaam ku qaatay noloshiisa kala badh, lacagna aan la siinin, Meesha loo celinayo ee aad sheegaysaan soomaha tan maalin walba qaraxu ka dhaco ? ee madaxtooyada xiitaa hoobiyeyaasha lagu rido maalin walba, maqaaxiyaha, hutelada, suuqyada, meel walba dadka lgu dilo …???!!!!!!!!
Wax sida loo qoro waan aqaanaa looma qoro, hadalkuna maha inuu kuu qabto sida saxaradii,oo aad wax walba iska tiraado ee murti ayaa lagu hadlaa ama la qoraa ama waa layska aamusaa.
Asc been ayaad naftiina usheegaysa wakuma kan kufaraxsan wadan dagaal hareeyay inuu kulaabto alla soomalida faan jeclaa dhalinyarada wadankooda manecba balse ugaarsi gaar ah ayaa lagu hayaa cadaaladna maheestaan marka runta aan isusheegnowaqti lalaabto wali lama gaarin waana xadgudub waqtigan
Asc wr wbt dhaman walaha waxaan idin ku darsan fikirayga markaa anigu waan soo dhow ayna yaa dadka in wadankoodi loo celiyo taasna waxaa keentay in aanu ka tagnay dhaqank iyo asluubtii noo ahayd sumad noo gaar ah waxaana orankara waa khyr alle nala maagay in gaalka nagu soo jesado waayo ruuxna ma oga wixii khyr u ah iyo wixii shar u ah allena wuxuu yidhi waxaad khyr moday saan oo shar idiin ah ayaa jira waxaad shar umalaynayn oo khyr idin ah ayaa jira markaa waanu khyr nasan insha allah
Xaasidiin kuwa lahoo wan ku farax sanhy war idinka hadad sharci ledihiin dadkaan maheestaan hamikodana wali magaarin kan dowlada somaliya kasocda haduu saxiixay inkaar alla haku rido oo umadaan nolosha soo raadsaday dhuunta qabtay kaas hadeeba run thy habaar uu ka dhargaaa
May 12, 2016 at 00:40
Waryaa ilaah yaqano waan kufaraxsanahay eeyleyahiin waxa eey kufaraxsanyahiin eeyba aqoon malaha? Waryaan been laisusheegin meel laiskuceliya nagama horeeyseee lakiin dhaha ilaah waxa qeeyr noogujira hanawafajiyo ilaa asagaa og wax noofican iyo wax nooxun samirkane waa nolasha waxkasta ahoow hoowl adag waa kutabanee marka umuraha allaha noosahlo akhyareey amiin